राजनीति – Everest News Nepal
यो देशको संघीयता खोलाले मागेको हो ? प्रदेश मन्त्री जमरकट्टेल
प्रदेश मन्त्री जमर कट्टेल
मैले भनी राखेको छु । गण्डकी प्रदेश त्यो हुन सक्तैन । त्यो गण्डकी हुँदै होइन, किनभने गण्डकी खोलाले मागेको हो संघीयता ? होइन नि । त्यहाँका उत्पीडित समुदायले मागेको हो । त्यहाँका उत्पीडित समुदायले खोजेको हो संघीयता । संघीयताले सम्बोधन गर्ने भनेको मूल पक्ष उत्पीडित क्षेत्र र उत्पीडित जातीय समुदाय हुन । त्यस कारणले पहिचानको मुद्धामा जो अहिले हामी प्रस्ट हुनुपर्छ ।’ झिल्को मिडियाबाट